Sidee Lacag Loogu Sameeyaa Ikhtiyaarrada Labaad ee Suuqyada Deggan? | vfxAlert official blog
Tusaha Joojinta Chande Kroll
Dhammaan hantida ku jirta suuqa cryptocurrency waxay muujiyaan isbeddel sare maalintii. Tani waa hab wanaagsan oo lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah . Kaliya waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho aaladda falanqaynta saxda ah sida tilmaameha Joogsiga Chande Kroll.
Chande Kroll Jooji muddada 14 . Waxay ka tirsan tahay kooxda tilmaamayaasha isbeddelka oo muujinaya isbeddellada isbeddellada. Sharaxaadda "qadiimiga ah" waxay u aragtaa soohdinta sare inay tahay heerka macaashka ugu sarreeya ee macaamilka, xuduudda hoose inay tahay heerka khasaaraha. Ikhtiyaarada ganacsiga crypto , burburka xuduudaha ayaa noqon doona ishaarka ugu horreeya ee furitaanka. Daahitaanku wuu ka yar yahay Celceliska Dhaqaaqa!
Qiimo -dhimista Qiimaha Oscillator (DPO) oo dhererkeedu yahay 21 . Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya aaladdan iyo inta badan oscillators-ka kale ayaa ah awoodda la iska indho-tiri karo saameynta isbeddellada muddada-dheer. Tirtiridda saameynta jihada ayaa si weyn u fududaynaysa geeddi -socodka falanqaynta dib -u -dhacyada gaaban iyo sixitaanka suuqa crypto . Tani waxay gacan ka geysaneysaa in la aqoonsado dib -u -noqoshada xooggan ee horumarinta isbeddellada dhaadheer.
Ka dib rakibidda aaladaha, daaqadda shaqada ee terminal waxay u egtahay sidan:
Xulashada UP (WAC) . Qiimuhu wuxuu jebiyaa labadaba ama kaliya soohdinta sare ee Jadwalka Chande Kroll ee hoos ilaa sare. Oscillator -ka Detrended wuxuu ka sarreeyaa heerarka eber.
Xulashada DHAQAN (GUDBIN) . Calaamadaha Crypto ee ka soo horjeeda: Qiimuhu wuxuu hoos ugu sii socdaa kanaalka ama ka hooseeya xadka hoose, Detrended ka hooseeya eber.
Ganacsatada waayo -aragnimada leh waxay isku dayi karaan inay furtaan heshiisyo horeba dib -u -noqoshada Detrended iyagoon sugin burburka heerka eber. Laguma talinayo kuwa bilowga ah ama had iyo jeer raadinaya xaqiijin ka timaada calaamadaha ikhtiyaariga ah ee baabuurta .
Furan ganacsi shumaca xiga kadib ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah calaamadaha xorta ah. Wakhtiga uu dhacayo ikhtiyaarradu waa inaysan ka yarayn 15-20 daqiiqo xitaa haddii waqtiga shaqada loo doorto 5 daqiiqo, sida fiidiyahayaga .
Joojinta Chande Kroll waxaa loo adeegsan karaa dhammaan hantida crypto . Waxaa jira calaamado badan oo been abuur ah oo ku saabsan altcoin - isbeddel sare oo leh dareere hooseeya. Ka aamin badan calaamadaha Ethereum, Litecoin iyo Bitcoin. Haddii goobaha asaasiga ah la beddelo, waxaan had iyo jeer ku bilownaa tirada muddooyinka, tani waxay noqon kartaa mid ku filan.
Oscillator -ka Qiimaha Hoos loo dhigay looma isticmaali karo inuu noqdo ikhtiyaarka kaliya ee furitaanka. Waxay muujinaysaa hagaajin wanaagsan oo gaaban iyo dib u gurasho. Tilmaamahani waa midka ugu fiican. Laakiin, haddii aadan xaqiijin calaamadaha ganacsiga crypto ee oscillator, ganacsigu wuxuu la mid noqon doonaa qiyaasidda.
Bitcoin waxay saldhig u noqon doontaa istiraatiijiyad kasta oo ganacsi crypto . Lacagaha kale ayaa raaca, in kasta oo dib u dhac ku yimid. Marka laga reebo Ethereum - waxaa jira dib -u -dhacyo iyo sixitaanno iska soo horjeeda. Tani badanaa waa kiiska marka la daabacayo dhacdooyin muhiim ah oo ku saabsan lacagta, falalka mala-awaalka ah waa kuwo gaaban oo ku dhawaad ma dhacaan.
Aan soo koobno . Ikhtiyaaraadka ganacsiga maalinlaha ah ee ikhtiyaarka leh tilmaameha joogsiga Chande Kroll wuxuu keeni karaa faa'iidooyin deggan, waxa ugu weyn ayaa ah in isbeddelka hantida uu yahay ugu yaraan 30-50 dhibcood. Qiimayaasha noocan oo kale ah waa xaalad caadi u ah Altcoin. Waxa ugu weyn ayaa ah in la doorto calaamado la isku halleyn karo oo la raaco maareynta lacagta adag!